"स्टेड-ल्यान्ड-स्पिल्ट" (जर्मन पार्लर खेल दिवस) को लागि विशेष मुद्रण 2013। रूसी रेल्रोडस सहित: मिनी-एक्सटेन्सन (2014) पनि समावेश छ।
यो विस्तारको लागि पाषाण युग दुई नयाँ झ्यालहरु जोड्दछन्: क्यासिनो!
जब तपाइँ क्यासिनो बनाउनुहुन्छ तपाईंले4वा5पासा फ्याक्नु पर्दछ (ह्याटको आधारमा) र तपाईंको अंकहरु लाई जित्न सफल अंकको रूपमा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
अंग्रेजी नियम: 2-5 खेलाडीहरूको लागि विस्तार केवल स्टोन युगको साथ खेल्न सक्छ! दुई क्यासिनो अन्य अनुहारमा मिलाईएको छ। यसैले दुई थैला एक झोलाबाट उच्च हुन्छ। कैसीनो खरिद गर्नको लागि, खेलाडीले दुई कच्चा माल चित्रण गर्दछ। त्यसपछि तिनीहरू4वा5पासासँग रोल गर्नुहोस्। यी पासाको रकम तुरुन्तै सफलता अंकको रूपमा सम्मानित गरिन्छ। ध्यान दिनुहोस्! कुनै उपकरणहरू प्रयोग गर्न सकिँदैन।
स्टोन उमेर अपडेट गरिएको: फेब्रुअरी 6, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 स्टोन उमेर
2.0.0.1 प्रेम बगहरू
2.0.0.2 ब्ल्याक जैक डबल एक्सपोजर
2.0.0.3 प्रमोदवन भेटियो
2.0.0.4 जिमी हेंडिक्स
2.0.0.5 युरोपियन रूले
2.0.0.6 जंगली4प्ले पावर पोकर Deuces
2.0.0.8 जंगली ब्यवहार